Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka LG Optimus Mfe
> Resource> Nyefee> Nyefee Ndi ana-akpo si iPhone ka LG Optimus
M nnọọ nwetara a nte LG Optimus ekwentị na m na-amaghị na-nyefee m niile kọntaktị ka ọhụrụ m ekwentị site m iPhone. Nte adịghị eji kaadị SIM, otú ahụ ka m na-eche na ọ bụrụ na ị pụrụ inyere m aka chepụta otú ịkwaga m niile kọntaktị ka ọhụrụ m Android ekwentị site m iPhone biko! Achọghị m ime ya aka n'ihi na ọ bụ ọtụtụ!
N'ezie, ị na-adịghị na-anọkarị na iji kọmputa ede kọntaktị niile na ọhụrụ gị LG Optimus ekwentị otu otu. Ọ bụ a tedious na-ewe oge ọrụ. Kama, ị pụrụ ịrụzu ya mfe mgbe i nwere ndị dị ike inyeaka - na Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ọ na tumadi mere maka enyere gị aka nyefee kọntaktị niile na 100% keukwu Ama si iPhone ka LG Optimus na otu Pịa. Kọntaktị transfer bụ nnọọ mma, ngwa ngwa na-adaba adaba, ị pụrụ ime ya na ala.
Otú nyefee kọntaktị site na iPhone ka LG Optimus
The akụkụ n'okpuru na-elekwasị anya na-agwa gị otú nyefee iPhone kọntaktị na LG Optimus na 1 Pịa. Ugbu a, ibudata Wondershare MobileTrans na lelee mfe nzọụkwụ. Ebe a na-ewe Windows version dị ka a na-agbalị.
Nzọụkwụ 1. Gbaa usoro ihe omume mgbe echichi na Windows PC
Ihe mbụ ị ga-eme bụ na-agba ọsọ onye-pịa Wondershare MobileTrans na Windows PC. Ya nkenke ma ọrụ-kensinammuo isi window-abịa si. Pịa Malite na ekwentị transfer windo na-egosi.
Cheta na: iTunes kwesịkwara arụnyere na mgbe i bu n'obi nyefee na kọntaktị na ndị ọzọ faịlụ na site na iPhone, iPod aka na iPad. Ọ nwere ike na hụ na Wondershare MobileTrans na-arụ ọrụ a n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ gị iPhone na LG Optimus ka Windows PC
Mgbe ahụ, nkwụnye na USB Gịnị jikọọ ma gị iPhone na LG Optimus ka PC na-agba ọsọ Windows os. The Wondershare MobileTrans ga-amata ha n'oge na-adịghị mgbe ahụ gosiri ha na abụọ n'akụkụ nke isi window. Gị iPhone bụ na ekpe, na LG Optimus ke ziri ezi. Pịa tụgharịa mgbe ị chọrọ nyefee kọntaktị site na LG Optimus ka iPhone.
Nzọụkwụ 3. Copy kọntaktị site na iPhone ka LG Optimus
Na, na, pịa Malite Copy. Kọntaktị transfer-ewe gị a obere oge. Mmapụta kọntaktị transfer window na-egosikwa na ị pasent nke kọntaktị transfer ọganihu mmanya. Mgbe kọntaktị transfer-agwụ, kọntaktị niile ga-azọpụta na esịtidem kaadị ebe nchekwa gị LG Optimus.
Ugbu a, ị kwaga kọntaktị site na iPhone ka LG Optimus. Ịhụ ụfọdụ oyiri kọntaktị? Echegbula. Ị nwere ike na-atụgharị nke Wondershare MobileGo for Android maka enyemaka. Ọ bụ ihe Android njikwa, nke na-enyere gị aka ịchọta ma jikota niile oyiri kọntaktị, na nyefe kọntaktị n'etiti gị LG Optimus na Outlook, Windows Live Maill, Windows Akwụkwọ Adreèsị na VCF faịlụ.